3 Sep 2019 . 4:42 PM
Samsung ကနေ အခုအချိန်မှာ Galaxy Note 10 စမတ်ဖုန်းတွေကို မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခု Galaxy Note 10 ဖုန်းတွေဟာ Android Flagship ဖုန်းတစ်ခုကို လိုက်ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာလို့ ပြောလို့ရပေမယ့် တကယ်တမ်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် စျေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ တခြားစမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဥ်ကြည့်တာက ပိုပြီး အဆင်ပြေမှာပါ။
အဲ့ဒီအတွက် Samsung Galaxy Note 10+ စမတ်ဖုန်းကို ယခုနှစ်အစောပိုင်းတုန်းက မိတ်ဆက်ထားခဲ့တဲ့ Huawei P30 Pro နဲ့ နှိုင်းယှဥ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Design ပိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် Huawei P30 Pro နဲ့ Samsung Galaxy Note 10+ ဖုန်းတွေက ထင်ထားတာထက်ကို တူညီတယ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျောဘက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ Quad Camera Setup ကို ဒေါင်လိုက်ထားတာနဲ့အတူ Gradient Design ကို သုံးထားတာက တော်တော်လေးကို ဆင်တူနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Design ပိုင်းမှာ ဆင်တူတယ်ဆိုတာကလွဲရင် Samsung Galaxy Note 10+ ရော Huawei P30 Pro ဖုန်း ၂ ခုစလုံးက တကယ့် Android Premium စမတ်ဖုန်းတွေဆိုတာ တန်းသိနိုင်တဲ့ Build Quality တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Design ပိုင်းအရတော့ ဘယ်ဖုန်းပဲရွေးရွေး နောင်တရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး တူညီတဲ့ Design ရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့် Huawei P30 Pro ဖုန်းက Galaxy Note 10+ ထက် စျေးပိုသက်သာတာကလည်း ထည့်သွင်းစဥ်းစားရမှာပါ။
ဒီလိုမျိုး အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Flagship Level စမတ်ဖုန်းတွေကို ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် Camera ပိုင်းမှာလည်း အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ရလဒ်တွေကို လိုချင်ကြမှာပါက အသေအချာပါပဲ။ ဒီ Huawei P30 Pro ရော Samsung Galaxy Note 10+ ဖုန်းရော Quad Back Camera တွေကို သုံးစွဲထားတယ်ဆိုပေမယ့် Specifications တွေအရတော့ ကွာခြားချက်တွေများပြားနေပြန်ပါသေးတယ်။
Megapixels အရကြည့်မယ်ဆိုရင် Huawei P30 Pro မှာ 40+20+8MP Camera နဲ့ Depth-of-field Effect အတွက် ToF Camera ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Setup ကို အသုံးပြုထားပြီးတော့ Samsung Galaxy Note 10+ မှာတော့ 12+12+16MP Camera နဲ့ AR ပိုင်းအတွက် ToF DepthVision Camera တစ်ခုကို ထည့်သွင်းထားတဲ့ Setup ကို အသုံးပြုထားတာပါ။ ဒါ့အပြင် Huawei P30 Pro က နာမည်ကြီး Germany Camera Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Leica နဲ့လည်း ပူးပေါင်းထားပါသေးတယ်။
Specs ပိုင်းမှာတော့ Huawei P30 Pro က ပိုသာနေတယ်လို့ ပြောလို့ရနေပြီးတော့ Feature ပိုင်းမှာလည်း Galaxy Note 10+ ထက်ပိုသာတဲ့ Feature တွေပါဝင်နေပြန်ပါသေးတယ်။ ဥပမာပြောရရင် 50x Hybrid Zoom ၊ Super Low Light Feature ၊ Macro Mode နဲ့ ပုံမှန် RGB Sensor ထက် Light Sensitivity ပိုကောင်းတဲ့ RYYB SuperSpectrum Sensor တွေကို အသုံးပြုထားတာက Huawei P30 Pro ကို ဒီ Camera ပိုင်းမှာ Galaxy Note 10+ ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။
Selfie Camera ပိုင်းမှာတော့ ဒီ P30 Pro နဲ့ Galaxy Note 10+ စမတ်ဖုန်း ၂ မျိုးစလုံးက Single Selfie Camera ကိုပဲ အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ P30 Pro ရဲ့ 32MP Selfie Camera က Note 10+ ရဲ့ 10MP ထက် ပိုပြီး Details ကောင်းတဲ့ ပုံတွေရိုက်ကူးနိုင်သလို P30 Pro ရဲ့ f1.9 Aperture က Note 10+ ရဲ့ f2.2. Aperture ထက် Low Light ပိုင်းမှာ ပိုသာတဲ့ရလဒ်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ဦးမှာပါ။
Battery ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Huawei P30 Pro ဖုန်းမှာ 4200mAh Battery နဲ့ Galaxy Note 10+ ဖုန်းမှာတော့ 4300mAh Battery တွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Battery Capacity အနေနဲ့ကတော့ တူတူပဲလို့ပြောလို့ရပြီးတော့ Charging ပိုင်းကိုပဲ အဓိကကြည့်ရမှာပါ။
Charging အနေနဲ့တော့ Samsung Galaxy Note 10+ ဟာ 45W Charging အထိကို Support ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဒါက တကယ်ကို အထင်ကြီးစရာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ Galaxy Note 10+ ဖုန်းကို ဝယ်ယူတာနဲ့ 45W Charger ကို ရရှိမှာမဟုတ်ဘဲ သီးခြားဝယ်ယူရမှာပါ။ Packaging ထဲမှာ 25W Charger ပဲပါဝင်တဲ့အတွက် ဒီနေရာမှာတော့ Huawei P30 Pro ရဲ့ သီးခြားထပ်ဝယ်စရာမလိုတဲ့ 40W SuperCharge Charger က ပိုပြီး အဆင်ပြေနေတာဖြစ်ပါတယ်။
တခြားသောအချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ ဒီစမတ်ဖုန်း ၂ လုံးစလုံးက 7nm Architecture ကို အခြေခံထားတဲ့ Processor တွေကို အသုံးပြုထားပြီး လက်ရှိအချိန်အထိကို လုံးဝ Flagship Level Performance တစ်ခုရရှိစေဦးမှာပါ။ Huawei P30 Pro ရော Galaxy Note 10+ ဖုန်းမှာပါ 3.5mm Audio Jack ပါဝင်ခြင်းမရှိတာကလည်း တူညီနေသလို Face Unlock ၊ In-Display Fingerprint Sensor ပါဝင်တာကလည်း တူညီဦးမှာပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင် Samsung Galaxy Note 10+ ဟာ ကင်မရာပိုင်းနဲ့ Battery ပိုင်းလိုနေရာတွေမှာ P30 Pro ကို မမှီသေးသလို Display နဲ့ Galaxy Note Series ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် S Pen လိုနေရာမှာပဲ အသာရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စဥ်းစားသင့်တာက ဈေးနှုန်းဖြစ်ပြီး Huawei P30 Pro ကို ငွေကျပ် ၁,၄၉၉,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် Samsung Galaxy Note 10+ ရဲ့ ဈေးက ၁,၆၉၉,၀၀၀ ကျပ်ကနေ စတင်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အသစ်ဈေးမှာတင် ၂ သိန်းကွာနေပြီးတော့ P30 Pro က ထွက်ထားတာလည်း ကြာပြီဆိုတော့ အနည်းငယ်အသုံးပြုထားတဲ့ ဖုန်းတွေကို ဒီထက်ပိုသက်သာတဲ့ဈေးနဲ့တောင်ဝယ်ယူနိုင်ဦးမှာပါ။
အဲ့ဒီအတွက် စျေးပိုကြီးတဲ့အပြင် Display ပိုင်းနည်းနည်းပိုသာတဲ့ Galaxy Note 10+ ကို ရွေးချယ်မလား.. စျေးပိုသက်သာသလို Camera ပိုင်း Battery ပိုင်းပိုသာတဲ့ P30 Pro ကို ရွေးမလားဆိုတာကို Comment ကနေ တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဝေမျှပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။